खुसीको खबर: नेपालमा अग्रपंक्तिमा खटिएका २८४ सुरक्षाकर्मीामा देखियो कोरोना, २३० जनाले जितेर ड्युटिमा फर्किए ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
खुसीको खबर: नेपालमा अग्रपंक्तिमा खटिएका २८४ सुरक्षाकर्मीामा देखियो कोरोना, २३० जनाले जितेर ड्युटिमा फर्किए !
Published : 27 July, 2020 9:08 am
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका गरी दुई सय ८४ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीपछि सुरक्षा अंगलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटाएकामा सुरक्षाकर्मीतर्फ हालसम्म दुई सय ८४ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
उनका अनुसार नेपाली सेनातर्फ ९ जना भने उपचारकै क्रममा छन् । उनीहरूमध्ये एक जनाको सैनिक अस्पताल र बाँकीको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘७९ जनामा संक्रमण देखिएकामा ७० जना उपचारपछि ड्युटीमा फर्किसकेका छन् । बाँकी ९ जनामध्ये एक जनाको सैनिक अस्पताल र बाँकीको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले भने यसैगरी, नेपाल प्रहरीतर्फ १ सय १९ जनामा संक्रमण देखिएकामा ९५ जना उपचारपछि नियमित ड्युटीमा फर्किएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार आइतबार मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत चार जना प्रहरीमा संक्रमण देखिएको हो ।